Xukuumadda Somaliland Oo Shaacisay Dad Ku Geeriyooday Roobab Xalay ka Da’ay Hargeysa | Radio Hormuud
Xukuumadda Somaliland Oo Shaacisay Dad Ku Geeriyooday Roobab Xalay ka Da’ay Hargeysa
Hargeysa(RH)Allah ha u naxariistee lix qof ayaa ku dhintay, Sagaal qof oo kalena way ku dhaawacmeen inta la ogyahay daadad ka dhashay roob xoogle oo xalay ka da’ay magaalada Hargeysa iyo Nawaaxigeeda, sidaasna waxa shaaciyey Wasiirka Arrimaha Gudaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Maxamed Kaahin Axmed oo warbaahinta kula hadlayey Magaalada Hargeysa.
Dadka Geeriyooday ayaa waxa Laba qof ay ku dhinteen markii Laydh ku qabsaday xaafadda Sheekh Madar ee caasimadda Hargeysa, halka Afar qofna ay ku dhinteen Baabuur daad qaaday.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Maxamed Kaahin Axmed wuxuu intaas ku daray in sagaal qof ciidammada Booliska iyo kuwa dabdamisku ay ka badbaadiyeen daad qaaday.
Wasiirku wuxuu ugu baaqay dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa inay ka fogaadaan meelaha biyo mareenka ah si looga hortago mashaqo ka dhalata xiliga roobku da’ayo.
Maxamed Kaahin Axmed wuxuu dhambaal tacsi ah u diray qoysaska ay ka geeriyoodeen lixd qof ee ku dhintay roobkii caawa ka da’ay Magaalada Hargeysa.
Waxa kaloo Wasiirka Arrimaha Guduhu uu ammaanay Ciidammada Booliska iyo kuwa Dabdamiska oo gurmad laxaadle ka galay samato-bixinta dadkii roobku khasaaraha u geystay.
Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland Sareeye Gaas Cabdilaahi Fadal Iimaan ayaa Gaadiidleyda faray inay banneeyaan jidadka magaalada ee ay marayaan gaadiidka ciidammada ee gurmadka ku jira. Waxa kaloo halkaasi ka hadlay Maayarka Caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid (Soltelco) oo tacsi u diray qoysaskii ay ka baxeen lixda qof ee dhintay, waxaanu dadweynaha ku booriyey inay baneeyaan meelaha biyo mareennada ah.
Masuuliyiinta kale ee gurmadka ka galay khasaarihii ka dhashay roobkii caawa ka da’ay Hargeysa waxa mid ahaa Wasiirrada Warfaafinta, Hawlaha Guud, Badhasaabka Gobolka Maroodijeex iyo Masuuliyiin kale.